Iarahana amin'ny Sinoa ny fanamboarana azy ity, araka ny fanapahan'ny depiote nandritra ny fivoriana ara-potoana farany (Marché N°032/PRMP/UGPM/FC-RPI-18). 60 tapitrisa dolara ny vola avy amin'ny Sinoa efa vita sonia ny taona 2018, hanamboarana ity fotodrafitrasa ity, izay hirefy 9 692 metatra ny halavany ary 198 metatra ny sakany.
Ifarimbonan’ny orinasa sinoa isany AFECC (Anhui Foreign Economic Construction Corporation) sy ny SOGECOA ny manamboatra azy ao anatin'ny 24 volana.
Lanonam-pahavaratra izy ity. Nanoram-be ny andro teo Toamasina androany maraina talohan’ny nahatongavan’ny filoham-pirenena. Nanorana ihany koa tamin’ny fotoana nikabariany, toy izany koa tao anatin'ny rindrankiran'i Dah Mama sy Jerry Marcos, ity farany izay kandidan’ny “Isika rehetra miaraka amin’I Andry Rajoelina” amin’ny fifidianana solombavambahoaka ao Antalaha.